उर्जा क्षेत्रमै किन मरिहत्ते गर्छन् विदेशी लगानीकर्ताहरु ? - Suvham News
उर्जा क्षेत्रमै किन मरिहत्ते गर्छन् विदेशी लगानीकर्ताहरु ?
नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जलविद्युतमा देखिएको छ । चालू आवको चैतसम्ममा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै ८७ अर्ब ५६ करोड २३ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यो कुल लगानीको ४६ प्रतिशत हो ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हालसम्म १ खर्ब ९० अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । विभागका अनुसार अघिल्लो वर्ष (०७१÷७२) मा थपिएका पाँच परियोजनाले ५४ अर्बको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तथ्यांकअनुसार नेपालमा अहिलेसम्म ७४ वटा परियोजना स्थापना भएका छन् । यी परियोजनाले १० हजारलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो वर्ष भने भूकम्प र नाकाबन्दीको असरले गर्दा २ वटा परियोजना मात्र थपिएका छन् भने लगानी पनि न्यून रहेको छ ।
यसकारण बढ्यो लगानी
क्षेत्र ठूलो भएको र प्रतिफल पनि आकर्षक भएकाले जलविद्युतमा लगानी बढेको विज्ञहरुको ठम्याइ छ । उनीहरुका अनुसार, सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै लाइसेन्स प्रक्रियामा सरलीकरण, बैंकको सहज लगानी र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको व्यवस्था गरेसँगै बाह्य लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन् । वैदेशिक लगानी ल्याउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड गठन भएको छ । सरकारले हालैमात्र लगानी बढाउने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्पन्न गरेको छ । लगानीको वातावरण बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) ले बजार खुला गरिसकेको छ भने देशमा ऊर्जा संकट बढ्दै गएपछि प्रतिमेगावाट ५० लाख सहुलियत, १० वर्ष पूरै र ५ वर्ष आधा गरी १५ वर्ष कर छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले जलविद्युतमा लगानी बढाउने र जलविद्युतका प्रचुर सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जा संकट निवारण तथा १० वर्षे विद्युत् विकास अवधारणापत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य आकर्षण
विभागको तथ्यांकअनुसार जलविद्युतपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगानी प्रतिबद्धता उल्लेख्य छ । तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्म नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ९ सय ६८ परियोजना स्थापना भएका छन् । यी परियोजनाार्फत ३५ अर्ब प्रतिबद्धता आएको छ । यो हिस्सा कुल लगानीको प्रतिबद्धताको १९ प्रतिशत हो । संख्यात्मक हिसाबले उच्च देखिएको पर्यटन क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य लगानी बढेको छ । विभागले दिएको जानकारीअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित १ हजार १ सय ६७ परियोजना भित्रिएका छन् भने यी परियोजनामार्फत ३६ अर्बको एफडीआईको प्रतिबद्धता आएको छ ।
Prevसाताभर ४ अर्बमाथिको शेयर कारोबार, एभरेष्ट बैँकको कारोबार सबैभन्दा धेरै
Nextचिनसँग जोडिने अवसरको बेवास्ता गर्दै सरकार